Sonos Roam, isithethi esiphathekayo esingathambekiyo kumgangatho wesandi namandla | Ndisuka mac
Esi sesinye sezona zithethi ziphathekayo esasikufuna kakhulu ukuzama, indlela encinci, elula, eyomeleleyo, enamandla kwaye ephathekayo Sonos Roam. Inkampani yaseSonos yaziwa ngomgangatho weemveliso zayo, ixabiso elifanelekileyo, amandla esandi kunye noyilo, konke oku kuyahlangana kule Sonos Roam intsha.
Kwaye isithethi esincinci esiphathwayo senkampani sibonelela ngezibonelelo ezibabazekayo kwesi sithethi sincinci. Sisithethi sesibini esiphathwayo senkampani ukusukela oko i-Sonos Move nayo yathathelwa ingqalelo njengesithethi esiphathwayo kodwa le Roam iya inyathela phambili.
Izibonelelo ezinikwa sesi sithethi siphathwayo ziyamangalisa ngokwenene, simangalisiwe ngamandla esithethi esincinci kunye nemilinganiselo encitshisiweyo. Kufuneka songeze ukuxhathisa okanye mandithi Isiqinisekiso se-IP 67 sokuba bayongeza kuyo, kuba iyakusivumela ukuba siyibeke ngokuthe ngqo emanzini kubunzulu be-1 m imizuzu engama-30. kwaye isithethi sisazosebenza ngokugqibeleleyo. Ngokucacileyo yongeza ukunganyangeki eluthulini kwaye "kunzima" ukuze ungakhathazeki ukuba iwele phantsi.
1 Uyilo kunye neenkcukacha eziphambili
1.1 Dlulisa umculo wakho ukusuka kwiRoam ukuya kwezinye iiSonos
1.2 Uhlelo lokusebenza lweSonos luya lubangcono
1.3 Umgangatho wesandi kunye namandla kule Sonos Roam
Uyilo kunye neenkcukacha eziphambili
Le entsha I-Sonos Roam ifumaneka ngemibala emibini emnyama nemhlophe. Kwimeko yethu sinemodeli emnyama kwaye intle ngokwenyani, ukongeza kwezinye izithethi ze-sonos esinombala ofanayo kwaye ke zisinika umgca wokuyila ogqibeleleyo. Izithethi ezikule mimandla zibekwe ngobuchule ukuze zibonelele ngesandi esifanelekileyo, ngaphandle kokuyekisa kuyilo.
Iyahambelana ngokupheleleyo ne-AirPlay 2 (ukuze sikwazi ukudlala umculo kwizixhobo ezininzi ngaxeshanye) iWiFi kwaye okokuqala kwizithethi eziphathwayo zikaSonos, iBluetooth iyahambelana. Kwaye iSonos Move, ekwabizwa ngokuba sisithethi esiphathekayo senkampani, ayisiyiyo.
ukuba sebenzisa uqhagamshelo lweBluetooth 5.0 kule Sonos Roam intsha Kuya kufuneka ucofe ubambe iqhosha lamandla de kube kukhanya i-LED eluhlaza, emva koko kufuneka siyikhangele kwisixhobo seBluetooth kwaye siyidibanise.
I-Sonos iyahambelana noMncedisi kaGoogle kunye ne-Alexa, ke uya kuba nakho ukusebenzisa aba bancedisi kwiRoam encinci njengoko usenza kwi-Move okanye kwi-soundbar ye-Arc, njl. iyahambelana nokutshaja kweQi ukuze ubize ngaphandle kweentambo. Ngokucacileyo, ikwaxhasa ukutshaja kwizibuko likaSonos. Itshaja yodonga ayongezwanga ebhokisini, iza kuphela nentambo yokutshaja ye-USB C.
Ubunzima bayo bungu-430 gr ukuze ikukhaphe naphina naphina kwaye ikwanakho ukuzimela ngokwamanani aqhelekileyo Iiyure ezili-10 zokuvelisa kwakhona iintsuku ezili-10 ekuphumleni.
Dlulisa umculo wakho ukusuka kwiRoam ukuya kwezinye iiSonos
Le Sonos Roam isivumela ukuba sihambise umculo esiwumameleyo xa sifika ekhaya okanye eofisini kuso nasiphi na esinye isithethi setoni ngendlela elula, ekhawulezayo nefanelekileyo. Ukwenza eli nyathelo kufuneka sibe sinayo izithethi eziqhagamshelene nenethiwekhi yeWi-Fi.
Ngoku kufuneka sisondeze isithethi seSonos Roam xa sifika ekhaya okanye eofisini nesinye isithethi senkampani efana neArc soundbar okanye iSonos One kwaye sigcine ucofa iqhosha lokuDlala. Ngalesi senzo, umculo esiwudlalayo kwisithethi sethu uya kuhamba uye komnye ngokukhawuleza.
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu luyawazi umsebenzi we-TruePlay esele sithethile ngawo ngaphambili kwiSoydemac. UNonos Trueplay ikuvumela ukuba uvelise kwakhona isandi esimangalisayo kwizithethi ngokuhlalutya imeko-bume kunye nokubonelela ngezona zandi ziphezulu zomculo ezikhoyo.
Uhlelo lokusebenza lweSonos luya lubangcono
Kuyinyani ukuba izithethi ze-Sonos zifuna isicelo sokutyikitya ukuze sikwazi ukungqamanisa kunye nokwenza isebenze. Kodwa esi sicelo songeza ukhetho ngakumbi nangakumbi kunye nophuculo, kulula kakhulu ukusisebenzisa kwaye sinika ithuba lokumamela kwirediyo yeNonos uqobo kunye nezinye izitishi. Kule meko sinako yongeza u-Sonos Roam wethu kwisicelo ngokusa isithethi kufutshane ne-iPhone.
Njengee-Apple's AirPods, ii-AirPods Pro, kunye nee-AirPods Max xa sisondeza isithethi xa sele sivuliwe iya kuvumelanisa ne-iPhone yethu ngokuzenzekelayo. Kulungile kwaye kulula ukwenza.
Umgangatho wesandi kunye namandla kule Sonos Roam
Okokuqala esiza kuthi kukuba kufuneka sithathele ingqalelo ubungakanani obuncinci bale Roam kwaye inamanqanaba ali-17 cm ubude nge-6 cm ukuphakama, incinci ngokwenyani kwaye umgangatho kunye namandla esandi esibonelelayo ngobundlongondlongo.
Asiyi kuthenga esi sithethi sincinci nge-Sonos Arc yesandi sesandi. kuba ayinakuthelekiswa nanto, kodwa kuyinyani ukuba amandla ayo kunye nomgangatho onikezelwa zizithethi ezihlanganisiweyo kule Roam incomekayo.
Kwelinye icala, nokuba unesithethi esiphakamileyo, i umgangatho weemakrofoni zakho Bavumela umsebenzisi ukuba abhenele kwi-Alexa okanye abancedisi bakaGoogle ukuba beze ngokulula kwaye ngaphandle kokungxola. Awuyi kuba neengxaki malunga noku.
Ukuba ufuna ukuba nesithethi esiphatheka ngenene ukuba uhambe naso naphi na, esinobunzima obuncinci kwaye sinikezela nge umgangatho olungileyo kunye namandla sicebisa le Sonos Roam. Ukuba le nto uyifunayo yinto enamandla ngakumbi kwaye mhlawumbi iyinto encinci ephathekayo, unokukhetha i-Sonos Move, enikezela ngamandla amancinci kodwa ukubambeka kancinci.
Uyilo kunye nesandi
Uyilo kunye namandla esandi ngaphandle kobungakanani
Ukudibanisa ne-AirPlay 2 kunye ne-Bluetooth 5.0
Iqhosha lamandla alinantetho kakhulu, linokuphucula
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Sonos Roam, isithethi esiphathwayo esingadibanisiyo kumgangatho wesandi kunye namandla
I-Apple Pay inokubonelela ngenkxaso yeCoinbase kungekudala